Ny Centara sy ny KMA Group dia nanao sonia ny HMA ho an'ny Resort Myanmar vaovao
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny Centara sy ny KMA Group dia nanao sonia ny HMA ho an'ny Resort Myanmar vaovao
Centara Hotels & Resorts, Mpandraharaha fandraisam-bahiny malaza any Thailandy, ary KMA Group, sampana iray an'ny Vondron'orinasa Kaung Myanmar Aung (KMA), dia nanao sonia ny fifanarahana fitantanana hotely (HMA) any Bangkok ho an'ny fitantanana hotely vaovao any Myanmar an'ny KMA. Ny fananana, miorina amin'ny iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza eto amin'ny firenena, dia haverina hajaina sy hotantanan'ny marika Centara manomboka amin'ity taona ity.
Ny lakile 95 Centara KMA Resort Inle Lake, miorina eo amoron'ny farihin'i Inle, afovoan'i Myanmar, dia kasaina hisokatra mandritra ny telovolana fahaefatra 2019.
Faly be izahay fa hiroso amin'ny fiaraha-miasa amin'ny KMA Hotels, iray amin'ireo orinasa mandray vahiny lehibe eto Myanmar, ”hoy izy Thirayuth Chirathivat, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Centara Hotels & Resorts. "Ity fifanarahana ity dia ahafahan'ny Centara mametraka sehatra lehibe eo amin'ny firenena iray izay mety hanana fivoarana goavana ho an'ny fizahan-tany ary hiara-hiasa amin'ny ekipa mpitantana efa za-draharaha ao amin'ny KMA."
KMA Group of Companies dia orinasa tsy miankina iray natsangana ary notarihin'ny filoha U Khin Maung Aye, filohan'ny CB Bank. Ny Vondrona dia ahitàna orinasa orinasa 15 miasa amina karazana indostria maro karazana.
"Faly izahay manana ny marika matanjaka sy ny fahaiza-mitantana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Centara tonga ao amin'ny trano fananana vaovao," hoy izy Khin Maung Aye, Filohan'ny KMA Group. "Matoky aho fa ny fisian'i Centara ao Myanmar dia handray anjara amin'ny fanatanterahana ny fahafahan'ny firenena fitomboan'ny fizahan-tany ary hiantoka fahombiazana hatrany amin'ny orinasan'ny hotely sy fizahan-tany KMA."
Centara dia nanao sonia MOU niaraka tamin'ny KMA tamin'ny fiandohan'ity taona ity ho an'ny fitantanana hotely enina sy hotely any Myanmar. Ity fifanarahana fitantanana vaovao ity dia maneho ny fahavitan'ny fifanarahana voalohany amin'ireo fananana ireo miaraka amin'ny hafa voatondro hanaraka tsy ho ela.
Myanmar no firenena faharoa lehibe indrindra any Azia atsimo atsinanana ary mirehareha amin'ny iray amin'ireo toekarena mitombo haingana indrindra ao amin'ny faritra. Ny tahan'ny fitomboan'ny fizahantany 8.5% isan-taona hatramin'ny taona 2025 dia mametraka ny firenena ho eo an-tampon'ny tsena fizahantany mitombo haingana indrindra eto an-tany.
Ny fanampim-pananana trano vaovao any Myanmar dia porofo misimisy kokoa momba ny paikady fanitarana ataon'ny Centara, ary ny fampifangaroana ny fahaizan'i Centara sy ny fahaizan'ny KMA Group amin'ny fampandrosoana dia azo antoka fa hampiakatra ny sehatry ny fandraisana vahiny ao Myanmar.
Nihaona tamin'ny tompon'i Jamaica Tallawah ny minisitry ny fizahantany Bartlett
Ny Nosy Seychelles dia mankalaza ny fizotran-tany "fahavaratra tsy manam-petra" isan-taona any amin'ny faritra CIS